Intuthuzelo eLwandle-IRenti eNtofontofo eSandy Bay
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguLindsay
ULindsay unezimvo eziyi-129 zezinye iindawo.
Le Condo inobutofotofo ibekwe kwindawo entle yaseSandy Bay. Ngokufikelela ngokulula kwiilwandle ezikufutshane, iivenkile zokutyela kunye neevenkile, ibonelela ngokulula kokufikelela kwimisebenzi eyonwabisayo, ngelixa uhlala kwindawo ezolileyo nezolileyo. I-condo inokwamkela ukuya kuthi ga kwi-10 yeendwendwe kwaye ine-pool yangasese yoluntu-iyenza ibe yeyona ndawo igqibeleleyo yeholide yosapho okanye ipakishwe ngumhlobo-yokuzonwabisa!
Le condo entsha kraca ibonakalisa ubuncinci kunye noyilo lwangoku, kunye nokuchukumisa intuthuzelo emema undwendwe ukuba luncokole kwisiqithi esikhulu kwaye babelane kwinkampani yomamkeli. Nokuba uyapheka, uphunga iwayini okanye ukonwabela nje amanzi ahlaziyayo ekhokhonathi-isiqithi yeyona ndawo iphambili yale ndawo!
Igumbi lokuhlala elimemayo liyingcamango evulekileyo kwaye iqhayisa ngeTV kunye nenkqubo yokuzonwabisa, i-sofa yokulala kunye neyunithi entsha ye-air conditioning unit.
Umatrasi obutofotofo kunye nelineni ezithambileyo kuwo onke amagumbi okulala ziqinisekisa ukuba iindwendwe 'zilala ngokuzolileyo emva kokuchitha usuku kuhlola isiqithi.
Ipatio yangaphandle inendawo yokuhlala kunye nomgodi womlilo, kunye nodonga lwamatye olunamakhandlela ahlaziyiweyo okukhanyisa okongeziweyo. Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokonwabela i-cocktail kunye ne-marshmallows eyosiweyo emlilweni ngelixa usenza iinkumbulo ezihlala ubomi bonke.
Indawo yentlalo yoluntu inequla elihle, elinendawo yokuhlala ephangaleleyo kunye nendawo yokudlala yabantu bayo yonke iminyaka. Uluntu luvumela amatheko okuzalwa abucala okanye imibhiyozo ukuba igcinwe echibini - nceda usibuze iinkcukacha ezingaphezulu!